(၂၁)ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်ရေး ခက်ခဲမှုအချို့ ပြေလည်ရန် NCA ရေးထိုး ရှစ်ဖွဲ့ခေါင? - Yangon Media Group
(၂၁)ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး ကျင်းပနိုင်ရေး ခက်ခဲမှုအချို့ ပြေလည်ရန် NCA ရေးထိုး ရှစ်ဖွဲ့ခေါင?
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(NCA)လက်မှတ်ရေးထိုးရှစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး (၂၁)ရာစု ပင်လုံတတိယအစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ရေး ခက်ခဲမှုအချို့ကို ပြေလည်ရေးအဖြေ ရှာလိမ့်မည်ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် (PNLO)နာယကဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ အပစ်ရပ်ရှစ်ဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်များ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST)အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး PNLO နာယကမှ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ရှမ်းလူမျိုးအလိုက်အမျိုး သားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကောင်စီ(RCSS) က ယာယီရွှေ့ ဆိုင်းလိုက်တဲ့ ကိစ္စရှိတယ်။ ကန့်သတ်မှုအချို့ကြောင့်လို့ဆိုတယ်။ ဒါကိုအဖြေရှာဖို့ ဆွေးနွေးကြမယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမယ်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုက (၂၁) ရာစု ပင်လုံညီလာခံတတိယ အစည်းအဝေးကို မကျင်းပသေးဘဲ ဆိုင်းငံ့ဖို့ဆိုပြီး အဖွဲ့တစ်ခုကဆို လာတာရှိတယ်။ အဲဒီကိစ္စလည်း ဆွေးနွေးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ (၂၁)ရာစု ပင်လုံတတိယအစည်း အဝေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေပြေလည်ဖို့ပါ”ဟု PNLO နာယကဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောသည်။
(၂၁)ရာစု ပင်လုံတတိယ အစည်းအဝေးအတွက် ရှမ်းလူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံ ရေးဆွေးနွေးပွဲ(အကြို)ကို တောင်ကြီးမြို့တွင်ကျင်းပနိုင်ခွင့်မရှိခြင်း ကြောင့် လင်းခေးတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိပြုလုပ် မည့် ရှမ်းလူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ယာယီရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း (RCSS) က ကြေညာထားသည်။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU/KNLA) ဌာနချုပ် တွင် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်ကပြုလုပ်သော KNLA တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်း ရေးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးကို ဆိုင်းငံ့ထားစေလိုဟု သဘောထားပေးခဲ့မှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင်လုံတတိယအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီလကုန် ပိုင်းတွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ညီလာခံအတွက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးဖို ရမ်သာကျင်းပပြီးစီးထားကြောင်းသိရသည်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရေး ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်သည့် ညီညွတ် သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက် ဒရယ်ကောင်စီ D(UNFC) ကလည်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ (တိုးချဲ့)အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်ကကျင်းပပြီးစီးခဲ့ ပြီး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရေး အတွက်ညှိနှိုင်းရာတွင် နောက်ဆုံး တစ်ဆို့နေသည့်အချက်များအပေါ် အဖြေရှာရေးအတွက် နှစ်ဖက်ထိပ် သီးခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံညှိ နှိုင်းနိုင်ရန်နှင့် အခြားနည်းလမ်းများကိုဆက်လက်ရှာဖွေမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ARSA အကြမ်းဖက်သမားများ တိုက်ခိုက်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား?
ဝက်ဘ်ဆိုက် အားလုံးအတွက် အင်တာနက် အမြန်နှုန်း တန်းတူညီမျှရေး စည်းမျဉ်းများ အမေရိကန် ရုပ်သိမ??